Zvinhu Zvoomera VaMnangagwa naVaMthuli Ncube
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvehupfumi dzinoti zvinhu zvinenge zvave kutonyanya kuoma kubva apo mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vatoresa mhiko dare ravo remakurukota musi wa 10 Gunyana.
VaMnangagwa vakati vane chivimbo chekuti gurukota rezvemari, Muzvinafundo Muthili Ncube, vachagadzirisa zvinhu munyaya dzezvehupfumi.
Nyanzvi munyaya dzezvehupfumi vachidzidzisa paHarvad University muAmerica, Professor Robert Rotberg, vanoti VaMnangagwa vari kukundikana kugadzirisa nyaya dzezvehupfumi zvakonzerwa nekushandisa mari yakawandisa kudarika mitero yavari kuwana, zvikwereti, huori uye kusafamba kwezvinhu munyaya dzekurima.
Asi VaNcube vanoti vari mugwara rekuyedza kugadzirisa zvehupfumi uye vakaparura chirongwa cheTransitional Stabilisation Program kana kuti TSP chakatambirwa neInternational Monetary Fund, IMF neWorld Bank chakanangana nekubhadhara mari dzakawedzerwa pazvikwereti zvekunze kana kuti arrears inosvika bhiriyoni imwe chete nezviuru mazana masere zvemadhora.
Muzvinafundo Ncube vanotiwo vanoda kuderedza chikwereti chehurumende.
Mukuru weZimbabwe Coalition on Debt and Development, Amai Janet Zhou, vanoti zviri kunetsa kunzwisisa kuti mari iri kukweretwa nehurumende iyi iri kushandiswei nekuti dare reparamende hari sumwe.
Chikwereti cheZimbabwe kunze nemunyika chave kusvika madhora mamriyoni gumi nemasere.
Nyanzvi munyaya dzezvehupfumi vari nhengo yeZanu-PF, VaGilbert Muponda, vanoti VaNcube vakwanisa kugadzirisa zvimwe zvavakavambisa.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvehupfumi vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Doctor Godfrey Kanyenze, vanoti VaNcube vari kutokonzera kusagadzikana mumusika zvopa kuti zvinhu zvidhure.
Imwe nyazvi munyaya dzezvehupfumi vachidzidzisa paNelson Mandela Metropolitan University, VaGift Mugano, vanotiwo VaNcube vari kutatarika kurwisa nyaya yehuori.
Nyaya yemutero wakaparurwa naVaNcube wekuti vanhu vabhadhare masendi maviri pazvinhu zvinotangira pamadhora gumi zvichikwira, yakonzerawo kusawirirana munyika.
Doctor Kanyenze vanoti izvi zviri kukanganisa zvinhu munyika.
Asi mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries, VaSifelani Jabangwe, vanoti mutero uyu ukabatwa zvakanaka unoshanda.
Imwe gangaidzwa mhezi yavavira mudumbu kuna VaNcube inyaya yekuti vashandi vehurumende vanoti mihoro yavo haichareve chinhu uye vanamukoti navana chiremba vanoti vave kuda kubhadharwa nemari yekuAmerica kwete maRTG’s.
Asi mari iyi, kunyanya pari,zvino, haisi kubatika sematsananguriro aVaJabangwe.
Kuti zvinhu zvifambe, nyanzvi munyaya dzezvehupfumi idzi dziri kutenderana kuti panotoda kuti vatungamiri venyika vasunge dzisimbe vachitaurawo nevemabhizimisi nevashandi.